दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा ने.क.पा. (मसाल)ले प्रसन्नता व्यक्त गर्दछ । त्यो चुनावमा जनताले देखाएको उच्चस्तरको उत्साहलाई पनि हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । तर त्यो प्रसन्नता व्यक्त गर्ने बेलामा हामी सरकारको गम्भीर आलोचना नगरिकन रहन सक्दैनौँ । यो चुनाव चैत्रमा नै हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसलाई बैशाख ३१ गने गर्ने निर्णय गरियो । त्यसलाई पनि दुई चरणमा बाँडेर दोस्रो चरणको चुनाव जेष्ठ ३१ मा गर्ने ठेगान गरियो ।पछि त्यसलाई पनि असार ९ र फेरिपछि असार १४ मा गर्ने निर्णय गरियो । त्यसरी सम्पन्न गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई पनि तेस्रो चरणमा क्षेत्र नं. २ मा असोज २ गर्ने गर्ने ठेगान गरिएको छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी त्यस प्रकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर प्रकारले आलोचना गर्दछ ।
अहिलेको चुनावमा स्वयं तराईका जनताले पनि उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् । त्यसबाट मधेशवादीहरूको चुनावलाई बहिष्कार गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न हुन नदिने जुन घोषणा गरेका थिए, त्यो तराईका जनताको आम जनमतका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । स्वयं प्रदेश नं. २का जनता पनि अहिले आफ्नो प्रदेशमा चुनाव हुन नसकेकोमा असन्तोष र दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् । मधेशवादीहरूले चुनावलाई असफल पार्न आन्दोलन गर्ने जुन धम्की दिएका थिए, त्यसलाई मधेशी जनताले समर्थन गरेनन् । त्यसबाट मधेशवादीको दवावमा परेर चुनावको मिति सार्दै जाने वा उनीहरूका राष्ट्रघाती मागहरूलाई पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्न विधेयक पेश गर्दै जाने नीति पनि राष्ट्रघाती हुनुका साथै स्वयं तराईका जनताको जनमतका विरुद्ध भएको कुरा प्रष्ट छ ।
समान्यतः दोस्रो चरणको चुनाव पनि पहिलो चरणको चुनाव जस्तै शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ । तर चुनावको बेलामा आचार संहिताका विरुद्ध पैसा वितरण गर्ने कार्य व्यापक रूपमा भएको छ । त्यस प्रकारको अराजनीतिक र भ्रष्ट तरिकाको विरोध गर्दा कतिपय स्थानहरूमा अप्रिय घटनाहरू पनि घटेका छन् । त्यस प्रकारको अप्रिय स्थिति पैदा हुनुका पछाडि कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अपनाएका भ्रष्ट र गैरराजनीतिक चरित्रहरू तथा निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिताका विरुद्ध भएका त्यस प्रकारका कारवाहीहरूलाई रोक्न असमर्थ हुनुका नै परिणामहरू हुन् । यो कुरा स्पष्ट छ कि त्यस प्रकारको भ्रष्ट तरिकाका बलमा जुन उम्मेदवारहरू विजय हुनेछन्, उनीहरूको कार्यकालमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरू पनि भ्रष्टाचारका केन्द्र बन्ने नै बढी सम्भावना हुनेछ । त्यो वास्तविकताप्रति नेकपा (मसाल)ले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी र विकासप्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिंदै आएका छौँ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ । त्यसो नहुँदासम्म पहिले २० वर्षसम्म स्थानीय निकायहरूको चुनावलाई रोकिए जस्तै तथा अहिले स्थानीय तहको चुनावमा बारम्बार मिति सार्ने, स्थानीय तहहरूको सङ्ख्यामा बारम्बार परिवर्तन गर्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरूमा बारम्बार संशोधन गर्ने गरिए जस्तै भविष्यमा पनि त्यस प्रकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यहरू कायम रहने छन् । त्यस प्रकारका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सामेल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
प्रथम चरणको निर्वाचनका सिलसिलामा कतिपय राजनीतिक पक्षहरूले मतगणनामा कैयौँ अनियमितता वा जोरजर्वजस्तीगर्ने गरेका कतिपय उदाहरणहरू प्रकाशमा आएका छन् । त्यस सिलसिलामा भरतपुरकाण्ड विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । मतगणनाका दौरानमा त्यस प्रकारको कुनै अनियमितता वा जोर जवरजस्ती हुन नदिन ने.क.पा. (मसाल)ले सम्बन्धित सबै राजनीतक सङ्गठनहरू, निर्वाचन आयोग र सरकारको समेत ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छ ।
मिति ः २०७४ असार १५ गते